Ntuziaka a ga-emetụta ndị na-eji wordpress.org. Maka ndị mmadụ na-eji wordpress - cec pc.com, ọ gaghị ekwe omume ịwụnye plugins n'ihi ụfọdụ ike ya. Ọ dị mkpa ịmepụta webpress.com website iji nwee ike iji plugins. E nwere ọtụtụ ụzọ ndị nwere ike isi wụnye wp ngwa mgbakwunye. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịwụnye mgbakwunye WordPress site na ịchọ ya na njikwa ọchụchọ, site na ị na-ebugo ya ma ọ bụ wụnye ngwa wp na mgbakwunye FTP.